ကုလားကိုယျစားလှယျ အစိုးရ ရဲ့ မယေုအကျဖျအမျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
February 5, 2017 July 9, 2021 kyaw zaw oo
ကုလားကိုယျစားလှယျ အစိုးရ ရဲ့ မယေုအကျဖျအမျ
strategic management consensus. concept of hegemony to cultural hegemony. Hegemony is where the flow of information in society is controlled byaruling elite. CH- A social class can dominate thru cultural norms. how media may serve asapropaganda tool to promote the dominant ideology(s) of the power elite.
[ Zawgyi version here] [ Unicode version below ]
ကုလားကိုယ်စားလှယ် အစိုးရ ရဲ့ မေယုအက်ဖ်အမ်
By ဦးကျော်ဇောဦး ၊ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက် ၊
ရခိုင်ကို ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ်နေသူတွေဟာ ရခိုင်တွေကို နွားသာသာ လောက်ပဲ၊ အသိဥာဏ်မရှိဘူး၊ နည်းနည်းပါးပါး ညာတာပါတေးလုပ်လိုက်ရင် လက်ခံတော့တာပဲ လို့ အယူရှိကြပုံရတယ်။ မီးစတစ်ဖက် ရေမှုတ်တစ်ဖက် ဆိုသလို ရခိုင်တစ်ဖက် ကုလားတစ်ဖက် လုပ်ထားရမယ် လို့ မြင်ကြပုံရတယ်။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သစ္စာရှိကြရမယ် ဆိုတဲ့ ဘက်က တွေးကြပုံ သိပ်မရဘူး။
ဒီလိုရှုထောင့်ကနေတွေးခေါ်ရပ်တည်ပြီး မောင်တောခရိုင်မှာလုပ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီစကားပြော မေယု FM ဆိုတာ လက်ခံသင့်တယ် ဆိုပြီးသကာလ ချောမွေ့သေသပ်စွာနဲ့ ပညာရှင်ဆန်ဆန်စကားတွေနဲ့ ပြောကြတာတွေ ရှိလာတယ်။
ဘာသာစကားရဲ့ နိုင်ငံရေး (politics of language) အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးချင်တယ်။
၁။ လူ့ဘောင်သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေးအရတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ခြင်း (political revolution) တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူး၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ စိုးမိုးမှု (cultural hegemony) ကို ဖြိုဖျက်နိုင်မှသာလျှင် အာဏာဟောင်းကို ဖြိုဖျက်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့အယူအဆကို စတင် တင်ပြသူဟာ အီတလီကွန်မြူနစ် အန်တိုနီယို ဂရမ်(မ်)ရှီ (Antonio Gramsci) ဖြစ်တယ်။ (သူဟာ ဘာသာဗေဒသမား မာ့ခ်စ်ဝါဒီ နိုင်ငံရေးသီအိုရီသမား ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှား ပါ တယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကကျမ်းလက်ရာ က “ထောင်တွင်းမှတ်စုများ” အင်္ဂလိပ်လို Prison Notebooks လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကျမ်းစု ဖြစ်တယ်။)
၂။ ( A = B ) ဖြစ်ရင် ( B = A ) ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ယူနိုင်သလိုမျိုး၊ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ မှန်ကန်ချက်ရဲ့ ဆင့်ပွားမှန်ကန်ချက် (corollary) တစ်ခုကို ပြောကြည့်မယ်။ တည်မြဲအာဏာကို ဖြိုဖျက်ဖို့အတွက် ယဉ်ကျေးမှုအရစိုးမိုးထားမှု ကိုလည်းဖြိုဖျက်ဖို့လိုအပ်တယ် ဆိုခဲ့ရင် . . . ၊ အခြားတစ်ဘက်မှာ ဘယ်လိုပြောနိုင်သလဲ ဆိုတော့ . . . ယဉ်ကျေးမှုအရ စိုးမိုးမှု (cultural hegemony) ကိုတည်ဆောက်နိုင်တာဟာ လူအစုအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ ပါဝါအာဏာ (power) အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံကို တည်ဆောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ချက်ထည့်ပြောရမှာက ယဉ်ကျေးမှုအရ စိုးမိုးမှု လို့ ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စိုးမိုးလွှမ်းမိုးနိုင်မှု (linguistic hegemony) ဟာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ (ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားကို မြန်မာ့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဟာ ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအရ စိုးမိုးနိုင်ခြင်း ဆီကို သွားဖို့ ကနဦးအဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။)
၃။ ချန်ကေချိတ်တို့ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမထူထောင်ခင် အချိန်အထိ တရုတ်ပြည်ကို စိုးမိုးခဲ့တဲ့ မန်ချူးမင်းဆက် မန်ချူးမျိုးနွယ်တွေအဖို့ မန်ချူးဘာသာစကားနဲ့ မန်ချူးယဉ်ကျေးမှုကို လွှမ်းမိုးခိုင်ခန့်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်နိုင်မှု မရှိခဲ့ခြင်းဟာ မန်ချူးတွေရဲ့ ကျဆုံးခန်းကို ဦးတည်စေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ အုပ်ချုပ်သူမန်ချူးတွေဟာ အုပ်ချုပ်ခံ ဟန်တရုတ်တွေကြားထဲမှာ စိမ့်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့ ဆယ်သန်းလောက်မျှသာ ရှိတော့တဲ့ မန်ချူးသွေးစစ်စစ် မန်ချူးလူမျိုးတွေတောင်မှ မန်ဒရင်းတရုတ်စကားကိုပဲ ပြောကြတော့ တယ်။
၄။ တစ်ခြားတစ်ပါးက (ခိုးဝင်ခြင်းအားဖြင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်)၀င်လာကြပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေအတွက် တည်ဆဲ(၈၂)ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းဘာသာစကားတစ်ခုခုကို တတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်က ဘာကို ရည်မှန်းထားသလဲဆိုတော့ နိုင်ငံသားအသစ်စက်စက် ဖြစ်လာမယ့်သူအား ဒီနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထဲကို တစ်သားတည်းဖြစ် စိမ့်ဝင်သွားစေခြင်း (integration or assimilation) ဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်သန်းစေဖို့ စီမံထားတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မူရင်းသဘောသဘာဝတွေ မပျောက်ကွယ်သွားဖို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစီအမံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ဒီနိုင်ငံမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမဆို ဒီလိုပါပဲ။ အခု မေယုFM ဖွင့်လှစ်လည်ပတ်ခြင်းဟာ အခုတင်ပြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထဲကို တသားတည်းဖြစ် စိမ့်ဝင်သွားစေခြင်း ဖြစ်စဉ်ရဲ့ လားရာပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တယ်။
၅။ UNHCR အဖို့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် နိုင်ငံသားရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးနေတာ လောလောဆယ် အောင်မြင်တာ မအောင်မြင်တာက တစ်ပိုင်း ပေါ့လေ . . . ၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံသားမရသေးပေမယ့် မွေးဖွားလာတဲ့ ဘင်္ဂါလီလေးတွေအတွက် မွေးစာရင်းရအောင် လုပ်ထားတာက နိုင်ငံသားရအောင် လုပ်တာနဲ့ ထပ်တူအရေးကြီးတယ် ဆိုပြီး လုပ်နေကြတာ ရှိပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ တိုင်းရင်းသား သာသာစကားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဟာ အလှမ်းဝေးသေးပေမယ့်၊ မေယုနယ်ခြားခရိုင်အဖြစ် (kalar) တွေက သီးခြားအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင် နဲ့ ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွေမှာ ဘင်္ဂါလီသာသာစကားကို ရေဒီယို အသံလွှင့်ခြင်းခံရတာဟာ ကြီးစွာသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကြီးစွာသောအသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးအရ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကို လှမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကတစ်ဆင့် (kalar)ယဉ်ကျေးမှု ဘာညာ သာဓကာ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ ထပ်ဆင့် လုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အစွန်းရောက်အယူအဆတွေကို ချေဖျက်နိုင်ဖို့ ရပ်ရွာအခြေပြုရေဒီယို (Community Radio) အစီအစဉ် လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာ အလွန်အားနည်းတဲ့ အကြောင်းပြချက် (lame excuse) သာလျှင် ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိုင်တွယ်ခြင်းနဲ့ အခြားသော ဖြေရှင်းနည်းများကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ၊ ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုသာလျှင် အရင်းခံပြီး ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ယဉ်ကျေးမှုတည်ဆောက်ရေးကို လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူခိုးဓါးရိုးကမ်းလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (မှားယွင်းစွာ ပြသတဲ့ အရင်းခံအကြောင်းကို လက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့ လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)။
၇။ အလားတူစွာ အကြောင်းပြချက်အမှားတွေ ပေးပြီး ရန်သူ့အားပေးလုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေကြတာ ရှိတယ်။ ဒီဘင်္ဂါလီဆူပူမှုတွေ ( တစ်နည်း နိုင်ငံတကာ အသုံးအနှုန်းအရ “ရခိုင်ပြဿနာ”) ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို လွဲမှားစွာ ဖြေကြတာ ရှိတယ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်မှုကြောင့် လို့ ဖြေရမယ့်အစား ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် တဲ့။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် ဆိုလိုက်မှတော့ နိုင်ငံတကာမာမူကြီးတွေ မာမူကြီးတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ် iNGO တွေဟာ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွင်းဝင်လာပြီး ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီအုပ်စုကို aid injection ဆေးထိုးပြီး ပိုမိုကြီးထွားစေတယ်။ လူဦးရေ မဆိုစလောက်သာ ကျန်တော့တဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကို ပိုမို မျက်နှာငယ်အားနည်း စေတယ်။ (ပြဿနာဖြေရှင်းရေးကို အထောက်အကူပြုရမယ့်အစား မှာယွင်းစွာ ပြသတဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြဿနာကို ပိုမို ကြီးထွားအောင် လုပ်တတ်ကြတာကို ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။)
၈။ ဒီ မေယု FM ကို ဖွင့်တာဟာ ဒီအစိုးရရေးတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ပြုခံရသူတွေကတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ လုပ်ကြပေါ့ ရှင်တို့က ရဲတွေကိုး . . . ဆိုတဲ့ အရပ်စကား ရေရွတ်ရုံပဲ တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မန္တလေးမှာ တရုတ်ဘာသာ FM ၊ ဒါမှမဟုတ်၊ ရန်ကုန်မှာ ဘင်္ဂါလီဘာသာ FM ဖွင့်ရင် အမျိုးသားရေး ဂုဏ်သိက္ခာ မိမိအမျိုသားတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်လောက် ထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတာကို ကိုယ်ချင်းစာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၉။ လက်ရှိအစိုးရဟာ ဘင်္ဂါလီ(kalar)တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော် ပမာ ဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ရခိုင် ပြည်သူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ စူးနစ်ဝင်လျက် ရှိတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်က ဒီအထင်အမြင်တွေကို ပိုမိုအားကောင်းစေတယ်။
၁၀။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအဖို့ မိမိတို့ ရန်သူ/မိတ်ဆွေ သုံးသပ်မှုကို ပြုလုပ်ရာမှာ သက်ရောက်မှု ရှိလာမှာ ဖြစ်တယ်။ ရခိုင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်အတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ့် မျိုးဆက် အဟောင်းအသစ်တွေ အားလုံးအတွက် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံလည်း ဖြစ်တယ်။ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက နိုင်ငံရေး လုပ်နေကြသူ/လုပ်လာလတ္တံ့သောသူတွေကိုလည်း ထိရောက်မှု ရှိမရှိကို ပြန်ဆန်းစစ်စေဖို့ ဖိအားပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇-ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်
၀၁း၅၁ နာရီ
By ဦးကြျောဇောဦး ၊ ၂၀၁၇ ဖဖေျောဝါရီလ (၅) ရကျ ၊
ရခိုငျကို ကြှနျပွုအုပျခြုပျနသေူတှဟော ရခိုငျတှကေို နှားသာသာ လောကျပဲ၊ အသိဉာဏျမရှိဘူး၊ နညျးနညျးပါးပါး ညာတာပါတေးလုပျလိုကျရငျ လကျခံတော့တာပဲ လို့ အယူရှိကွပုံရတယျ။ မီးစတဈဖကျ ရမှေုတျတဈဖကျ ဆိုသလို ရခိုငျတဈဖကျ ကုလားတဈဖကျ လုပျထားရမယျ လို့ မွငျကွပုံရတယျ။ ပွညျထောငျစု တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး သစ်စာရှိကွရမယျ ဆိုတဲ့ ဘကျက တှေးကွပုံ သိပျမရဘူး။
ဒီလိုရှုထောငျ့ကနတှေေးချေါရပျတညျပွီး မောငျတောခရိုငျမှာလုပျတဲ့ ဘင်ျဂါလီစကားပွော မယေု FM ဆိုတာ လကျခံသငျ့တယျ ဆိုပွီးသကာလ ခြောမှသေ့သေပျစှာနဲ့ ပညာရှငျဆနျဆနျစကားတှနေဲ့ ပွောကွတာတှေ ရှိလာတယျ။
ဘာသာစကားရဲ့ နိုငျငံရေး (politics of language) အကွောငျးကို ဒီနရောမှာ ဆှေးနှေးခငျြတယျ။
၁။ လူ့ဘောငျသဈကိုတညျဆောကျတဲ့နရောမှာ နိုငျငံရေးအရတှနျးလှနျဖွိုဖကျြခွငျး (political revolution) တဈခုတညျးနဲ့ မလုံလောကျဘူး၊ ယဉျကြေးမှုအရ စိုးမိုးမှု (cultural hegemony) ကို ဖွိုဖကျြနိုငျမှသာလြှငျ အာဏာဟောငျးကို ဖွိုဖကျြနိုငျမယျ ဆိုတဲ့အယူအဆကို စတငျ တငျပွသူဟာ အီတလီကှနျမွူနဈ အနျတိုနီယို ဂရမျ(မျ)ရှီ (Antonio Gramsci) ဖွဈတယျ။ (သူဟာ ဘာသာဗဒေသမား မာ့ချဈဝါဒီ နိုငျငံရေးသီအိုရီသမား ကှနျမွူနဈနိုငျငံရေးသမား တဈဦးအဖွဈ ထငျရှား ပါ တယျ။ သူ့ရဲ့ အဓိကကမျြးလကျရာ က “ထောငျတှငျးမှတျစုမြား” အင်ျဂလိပျလို Prison Notebooks လို့ ချေါကွတဲ့ ကမျြးစု ဖွဈတယျ။)
၂။ ( A = B ) ဖွဈရငျ ( B = A ) ဖွဈတယျလို့ ကောကျယူနိုငျသလိုမြိုး၊ အထကျကပွောခဲ့တဲ့ မှနျကနျခကျြရဲ့ ဆငျ့ပှားမှနျကနျခကျြ (corollary) တဈခုကို ပွောကွညျ့မယျ။ တညျမွဲအာဏာကို ဖွိုဖကျြဖို့အတှကျ ယဉျကြေးမှုအရစိုးမိုးထားမှု ကိုလညျးဖွိုဖကျြဖို့လိုအပျတယျ ဆိုခဲ့ရငျ . . . ၊ အခွားတဈဘကျမှာ ဘယျလိုပွောနိုငျသလဲ ဆိုတော့ . . . ယဉျကြေးမှုအရ စိုးမိုးမှု (cultural hegemony) ကိုတညျဆောကျနိုငျတာဟာ လူအစုအဖှဲ့တဈခုရဲ့ ပါဝါအာဏာ (power) အတှကျ လိုအပျတဲ့ အခွခေံကို တညျဆောကျလိုကျတာပဲဖွဈတယျလို့ ပွောရမှာဖွဈတယျ။ နောကျတဈခကျြထညျ့ပွောရမှာက ယဉျကြေးမှုအရ စိုးမိုးမှု လို့ ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဘာသာစကားဆိုငျရာ စိုးမိုးလှမျးမိုးနိုငျမှု (linguistic hegemony) ဟာ အရေးအကွီးဆုံးဖွဈတယျ။ (ဘင်ျဂါလီဘာသာစကားကို မွနျမာ့လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာ အသိအမှတျပွုခံရခွငျးဟာ ရှကေ့ပွောခဲ့တဲ့ ယဉျကြေးမှုအရ စိုးမိုးနိုငျခွငျး ဆီကို သှားဖို့ ကနဦးအဆငျ့ ဖွဈပါတယျ။)
၃။ ခနျြကခြေိတျတို့ တရုတျသမ်မတနိုငျငံမထူထောငျခငျ အခြိနျအထိ တရုတျပွညျကို စိုးမိုးခဲ့တဲ့ မနျခြူးမငျးဆကျ မနျခြူးမြိုးနှယျတှအေဖို့ မနျခြူးဘာသာစကားနဲ့ မနျခြူးယဉျကြေးမှုကို လှမျးမိုးခိုငျခနျ့မှုရှိအောငျ တညျဆောကျနိုငျမှု မရှိခဲ့ခွငျးဟာ မနျခြူးတှရေဲ့ ကဆြုံးခနျးကို ဦးတညျစတေဲ့ အကွောငျးအခကျြတှထေဲက တဈခကျြဖွဈတယျ။ အုပျခြုပျသူမနျခြူးတှဟော အုပျခြုပျခံ ဟနျတရုတျတှကွေားထဲမှာ စိမျ့ဝငျပြောကျကှယျသှားခဲ့တယျ။ ဒီကနေ့ ဆယျသနျးလောကျမြှသာ ရှိတော့တဲ့ မနျခြူးသှေးစဈစဈ မနျခြူးလူမြိုးတှတေောငျမှ မနျဒရငျးတရုတျစကားကိုပဲ ပွောကွတော့ တယျ။
၄။ တဈခွားတဈပါးက (ခိုးဝငျခွငျးအားဖွငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ)ဝငျလာကွပွီးတော့ ဒီနိုငျငံသားဖွဈဖို့ ကွိုးပမျးနကွေသူတှအေတှကျ တညျဆဲ(၈၂)ဥပဒေ သတျမှတျခကျြတှထေဲက တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈတဲ့ လိုအပျခကျြကဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီနိုငျငံထဲက တိုငျးရငျးဘာသာစကားတဈခုခုကို တတျမွောကျရမယျဆိုတဲ့အခကျြ ဖွဈတယျ။ ဒီအခကျြက ဘာကို ရညျမှနျးထားသလဲဆိုတော့ နိုငျငံသားအသဈစကျစကျ ဖွဈလာမယျ့သူအား ဒီနိုငျငံရဲ့ ယဉျကြေးမှုထဲကို တဈသားတညျးဖွဈ စိမျ့ဝငျသှားစခွေငျး (integration or assimilation) ဖွဈစဉျကို ဖွတျသနျးစဖေို့ စီမံထားတာဖွဈတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မူရငျးသဘောသဘာဝတှေ မပြောကျကှယျသှားဖို့ ပွုလုပျထားတဲ့ အစီအမံတှထေဲက တဈခုဖွဈတယျ။ ဒါဟာ ဒီနိုငျငံမှ မဟုတျပါဘူး။ ဘယျနိုငျငံမဆို ဒီလိုပါပဲ။ အခု မယေုFM ဖှငျ့လှဈလညျပတျခွငျးဟာ အခုတငျပွတဲ့ ယဉျကြေးမှုထဲကို တသားတညျးဖွဈ စိမျ့ဝငျသှားစခွေငျး ဖွဈစဉျရဲ့ လားရာပွောငျးပွနျဖွဈစဉျ ဖွဈတယျ။
၅။ UNHCR အဖို့ ဘင်ျဂါလီတှအေတှကျ နိုငျငံသားရအောငျ တိုကျပှဲဝငျပေးနတော လောလောဆယျ အောငျမွငျတာ မအောငျမွငျတာက တဈပိုငျး ပေါ့လေ . . . ၊ ဒါပမေဲ့ နိုငျငံသားမရသေးပမေယျ့ မှေးဖှားလာတဲ့ ဘင်ျဂါလီလေးတှအေတှကျ မှေးစာရငျးရအောငျ လုပျထားတာက နိုငျငံသားရအောငျ လုပျတာနဲ့ ထပျတူအရေးကွီးတယျ ဆိုပွီး လုပျနကွေတာ ရှိပါတယျ။ ထိုနညျးတူစှာပဲ တိုငျးရငျးသား သာသာစကားအဖွဈ အသိအမှတျပွုခံရခွငျးဟာ အလှမျးဝေးသေးပမေယျ့၊ မယေုနယျခွားခရိုငျအဖွဈ (kalar) တှကေ သီးခွားအုပျခြုပျရေးနယျမွေ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ မောငျတော၊ ဘူးသီးတောငျ နဲ့ ရသတေ့ောငျ မွို့နယျတှမှော ဘင်ျဂါလီသာသာစကားကို ရဒေီယို အသံလှငျ့ခွငျးခံရတာဟာ ကွီးစှာသော အောငျမွငျမှုတဈခုဖွဈတယျ။ ကွီးစှာသောအသိအမှတျပွုခံရခွငျးတဈခု ဖွဈတယျ။ ယဉျကြေးမှုအရ အသိအမှတျပွုခံရခွငျးဟာ နိုငျငံရေးအရ အသိအမှတျပွုခံရဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အရေးကွီးတဲ့ ခွလှေမျးတဈလှမျးကို လှမျးလိုကျတာဖွဈတယျ။ ဒါကတဈဆငျ့ (kalar)ယဉျကြေးမှု ဘာညာ သာဓကာ အသိအမှတျပွုခံရဖို့ ထပျဆငျ့ လုပျဆောငျမှုတှအေတှကျ အခွခေံအုတျမွဈ ဖွဈပါတယျ။
၆။ အစှနျးရောကျအယူအဆတှကေို ခဖြေကျြနိုငျဖို့ ရပျရှာအခွပွေုရဒေီယို (Community Radio) အစီအစဉျ လိုအပျတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြဟာ အလှနျအားနညျးတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ (lame excuse) သာလြှငျ ဖွဈပါတယျ။ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှုကို တငျးတငျးကွပျကွပျတိုငျတှယျခွငျးနဲ့ အခွားသော ဖွရှေငျးနညျးမြားကို မလုပျဆောငျဘဲ၊ ဒီအကွောငျးပွခကျြကိုသာလြှငျ အရငျးခံပွီး ခိုးဝငျဘင်ျဂါလီတှအေတှကျ ယဉျကြေးမှုတညျဆောကျရေးကို လုပျပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ သူခိုးဓါးရိုးကမျးလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ (မှားယှငျးစှာ ပွသတဲ့ အရငျးခံအကွောငျးကို လကျညှိုးမထိုးပါနဲ့ လို့ ဆိုရမှာ ဖွဈပါတယျ)။
၇။ အလားတူစှာ အကွောငျးပွခကျြအမှားတှေ ပေးပွီး ရနျသူ့အားပေးလုပျရပျတှေ လုပျနကွေတာ ရှိတယျ။ ဒီဘင်ျဂါလီဆူပူမှုတှေ ( တဈနညျး နိုငျငံတကာ အသုံးအနှုနျးအရ “ရခိုငျပွဿနာ”) ဘာကွောငျ့ ဖွဈရသလဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးကို လှဲမှားစှာ ဖွကွေတာ ရှိတယျ။ လူဝငျမှုကွီးကွပျမှုကွောငျ့ လို့ ဖွရေမယျ့အစား ဆငျးရဲမှဲတမှေုကွောငျ့ တဲ့။ ဆငျးရဲမှဲတမှေုကွောငျ့ ဆိုလိုကျမှတော့ နိုငျငံတကာမာမူကွီးတှေ မာမူကွီးတှရေဲ့ကိုယျစားလှယျ iNGO တှဟော ဝမျးသာအားရနဲ့ ဒီနိုငျငံအတှငျးဝငျလာပွီး ခိုးဝငျဘင်ျဂါလီအုပျစုကို aid injection ဆေးထိုးပွီး ပိုမိုကွီးထှားစတေယျ။ လူဦးရေ မဆိုစလောကျသာ ကနျြတော့တဲ့ ဌာနတေိုငျးရငျးသားတှကေို ပိုမို မကျြနှာငယျအားနညျး စတေယျ။ (ပွဿနာဖွရှေငျးရေးကို အထောကျအကူပွုရမယျ့အစား မှာယှငျးစှာ ပွသတဲ့ အကွောငျးရငျးခံကို လကျညှိုးထိုးပွီး ပွဿနာကို ပိုမို ကွီးထှားအောငျ လုပျတတျကွတာကို ပွောပွတာဖွဈပါတယျ။)
၈။ ဒီ မယေု FM ကို ဖှငျ့တာဟာ ဒီအစိုးရရေးတဲ့ သမိုငျးဖွဈပါတယျ။ ကြှနျပွုခံရသူတှကေတော့ ဘာတတျနိုငျမှာလဲ။ လုပျကွပေါ့ ရှငျတို့က ရဲတှကေိုး . . . ဆိုတဲ့ အရပျစကား ရရှေတျရုံပဲ တတျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ မန်တလေးမှာ တရုတျဘာသာ FM ၊ ဒါမှမဟုတျ၊ ရနျကုနျမှာ ဘင်ျဂါလီဘာသာ FM ဖှငျ့ရငျ အမြိုးသားရေး ဂုဏျသိက်ခာ မိမိအမြိုသားတှရေဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဘယျလောကျ ထိခိုကျစသေလဲ ဆိုတာကို ကိုယျခငျြးစာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၉။ လကျရှိအစိုးရဟာ ဘင်ျဂါလီ(kalar)တှရေဲ့ကိုယျစားလှယျတျော ပမာ ဆောငျရှကျနတေယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ရခိုငျ ပွညျသူတှရေဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ စှဲစှဲမွဲမွဲ စူးနဈဝငျလကျြ ရှိတယျ။ ဒီလုပျရပျက ဒီအထငျအမွငျတှကေို ပိုမိုအားကောငျးစတေယျ။
၁၀။ ဒီလုပျရပျဟာ ရခိုငျအမြိုးသားတှအေဖို့ မိမိတို့ ရနျသူ/မိတျဆှေ သုံးသပျမှုကို ပွုလုပျရာမှာ သကျရောကျမှု ရှိလာမှာ ဖွဈတယျ။ ရခိုငျ့ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးပိုငျခှငျ့အတှကျ ဆကျလကျတိုကျပှဲဝငျကွမယျ့ မြိုးဆကျ အဟောငျးအသဈတှေ အားလုံးအတှကျ အခကျြပေးခေါငျးလောငျးသံလညျး ဖွဈတယျ။ ဥပဒဘေောငျအတှငျးက နိုငျငံရေး လုပျနကွေသူ/လုပျလာလတ်တံ့သောသူတှကေိုလညျး ထိရောကျမှု ရှိမရှိကို ပွနျဆနျးစဈစဖေို့ ဖိအားပေးလိုကျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၇-ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၅) ရကျ
Previous UNHCR တညျး ဟူသော ထရိုဂနျြ မွငျးရုပျ
Next ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေးထဲက နှားနို့၊ ဝကျ နှငျ့ ခှေး တို့အကွောငျး